जनताको पनि गल्ती छ
अधिकांश विचारकहरु यो दृर्गतिका लागि राजनीति र प्रशासनमात्र हौइन, तिनका गल्ती थाहापाएर सहेर बस्ने जनताको पनि गल्ती देख्छन् । सही र गलत थाहा पाउने, गलतलाई गलत भनेर खबरदार गर्न नसक्ने जनताकै कारण यो बिल्लिबाठ हुनुमा मुख्य दोषी जनता नै हुन् । प्रतिनिधि चुन्न सक्ने, खबरदार गर्न नसक्नु जनताको कमजोरी हो । राजनीतिमा सत्तापक्ष, विपक्ष त हुन्छन्, कतिपय स्वार्थमा उनीहरु मिल्छन्, जसको मूल्य जनताले चुकाउनु पर्छ ।
राजनीति पेशा बनाउनेहरु सत्तामा छन्, तिनले सेवा होइन गर्ने भ्रष्टाचार नै हो । हुने नैतिकहीन नै हो । राष्ट्रघात गर्न हिचकिचाउन्नन् । यस्तै छद्मभेषी नेताका कारण नेपालको यो बर्बादी भएको हो । यिनै नेता र पार्टीलाई चुनावमा जिताउन जनता तैयार देखिन्छन् । शिक्षाको कमी छ तर अचेतन छैनन् जनता । सबैलाई थाहा छ, मुलुकमा भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, राष्ट्रघात, नाताबाद भइरहेको छ । थाहा पाएर पनि यस्ता पातकहरुलाई पन्छाउन जनता सक्दैनन् । अनि कसरी देश समृद्धी र शान्तितिर अग्रसर हुन्छ ? गत महिना केही खाली भएका सिटहरुमा चुनाव भयो । परिणाम आउँदा उही गनाउने अनुहार भएकाहरुले बाजी मारे । सत्तारुढ नेकपा र प्रतिपक्ष कांग्रेसलाई सवक सिकाउने गरी जनताले नयाँ दल र नयाँ अनुहारलाई जिताउने छन् भन्ने अनुमान फेल भयो । उपचुनाव नै भएपनि केही नयाँ अनुहारलाई जिताएको भए सत्तारुढ नेकपा र कांग्रेस सतर्क हुनेथिए । तिनैलाई जिताएपछि अधिनायकत्व र भ्रष्टाचार त बढ्ने नै भयो । शासनमा रहेका कसिंगरहरु कसरी बढारिनु ?
मतदाता अज्ञानीचाहिं छैन । मत तिनैलाई दिन्छन् र अरु बेला रम्रैसँग गाली गर्छन् र्। एनसेल प्रकरण होस् कि वाइडवडी, बालुवाटार जग्गा भ्रष्टाचार होस् कि सुनकाण्ड, भारतले लिपुलेकतिरका नेपाली भूभाग हड्पेको विषयमा पनि जनताले सरकारलाई दबाब दिएका छन् । सरकार छ कि हात्तीको छालाजस्तो, पटक्कै वास्ता गर्दैन् । स्थानीयदेखि संघीयसम्म नेकपाका व्यापक बहुमत छ, यसकारण तिनले जनआवाज नसुनेका होलान् । मत दिने बेलामा तिनैलाई दिने अनि अरु बेला गाली गरेर के गर्ने ? तह लगाउने समय चुनाव नै हो, चुनावका बेलामा सचेत जनता विचेत भएर तिनैलाई प्रतिनिधि छान्छन् । केही दिनअघि पूर्वराजा मध्यपश्चिम पुगेका थिए, ठूला पार्टीकादेखि आमनागरिकले जयजयकारको नारा लगाए । अहिले पूर्वराजा झापा पुगेका छन्, झापा राजतन्त्रमय बनेको छ । पूर्वराजाको जयजयकार देखिन्छ, लोकप्रियता यस्तो कि कुनै नेतामा त्यो आकर्षण देखिन्न । तर चुनावका बेलामा तिनै जनता राजतन्त्रविरोधमा उभिन्छन्, यिनै भ्रष्ट नेताहरुलाई जिताउने गर्छन् ।
भन्छन् जनता नेताले देश लुटे भन्छन् । भ्रष्टाचार गरे भन्छन् । राजनीतिकरण गरेर देशलाई अधिनाकयवादतिर धकेले पनि भन्छन् । चुनावमा तिनैको पृष्ठपोषण गर्छन् । जनता सोझा, नेता चतुर भएपछि सुधार हुने सवालै भएन, बाघको छाला ओढेर स्यालको रजाइँ चलिरहने भयो, चलिरहेको छ ।
गल्ती नेपाली जनताकै हो । ठीकलाई ठीक र बेठीकलाई बेठीक भनेझैं निर्णय पनि सोहीअनुसार दिनसके देशको यो हालत हुनेथिएन । झापाकाण्ड होस् कि जनयुद्ध, जनआन्दोलनपछिको परिवर्तनको लाभ कहेी नेताले उठाए, जनता हिजो पनि पिडित, आज पनि पिडित । नेपाली जनता नेताको किनबेचको राजनीतिको सिकार भइरहेका छन् । जित्दैनन् भनेर पुराना बेइमानलाई जिताउनु जनताको गल्ती हो । जनता उभिए भने सही उमेदवारले नजित्ने सवालै छैन । जनताले गल्तीगर्दा देशमा ब्रम्हलूट चलिरहन सम्भव भएको हो । नेताहरु आफूमाथि दोष आउने भयो कि पूर्वराजाको बिरोध गर्न थाल्छन् । दरवारले यसो ग¥यो, उसो ग¥यो भनेर भ्रम फैलाउँछन् । जनता त्यही भ्रमका पछाडि लाग्छन् । राजनीतिक पसल यसैगरी चलिरहेको छ र नेताहरु राजनीतिलाई सेवाका बदला व्यवसाय बनाइरहेका छन् । पहिले निरंकूशताले देश पछाडि धकेल्यो भनियो, अहिले झन कडा निरंकूशता सुरु भएको छ ।